St. Lucia - Xaqiiqada iyo Tirakoobka | Dhalashada Saint Lucia
St Lucia waxay leedahay cimilo kulul, kuleylka sanadka oo dhan, oo isku dheelitiran dabeylaha ganacsiga waqooyi bari. Celceliska heerkulka sannadlaha ah waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 77 ° F (25 ° C) iyo 80 ° F (27 ° C).
Daryeel caafimaad ayaa laga bixiyaa dalka oo dhan. Waxaa jira soddon iyo saddex (33) xarumo caafimaad, seddex (3) isbitaallo dowladeed, hal (1) isbitaal gaar loo leeyahay, iyo hal (1) isbitaal dhimirka.
Sanad dugsiyeedka waxbarashadu wuxuu bilaabmayaa Sebtember wuxuuna dhammaadaa Luulyo. Sannadku wuxuu u qaybsamaa saddex eray (Sebtember illaa Diseembar; Janaayo illaa Abriil iyo Abriil ilaa Luulyo). Oggolaanshaha dugsiga jasiiradda waxay u baahan tahay in la bixiyo waraaqaha ardayga iyo waraaqaha imaanshaha ee iskuuladi ay horey u dhigteen.
Ciyaaraha ugu caansan jasiiradda waa cricket, kubada cagta (kubada cagta) teniska, kubada laliska, iyo dabaasha. Ciyaartoyda noogu caansan waa Daren Garvin Sammy, Kabtanka Kooxda 'West Indies Twenty20 Team'; Lavern Spencer, bood booda sare iyo Dominic Johnson, cirifka cirifka.
Saint Lucia waxay leedahay kala soocida lahaanshaha tirada ugu badan ee Nobel Laureates qofkiiba adduunka. Derek Walcott wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ee suugaanta 1992dii Sir Arthur Lewis wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ee Dhaqaalaha 1979.
Dadweynaha: Qiyaastii 183, 657